Waxlọ ihe ngosi nka kacha mma nke America | Njem zuru oke
Waxlọ ihe ngosi nka kacha mma na America
Like na-amasị gị wax ngosi ihe mgbe ochie? Ha dị egwu, akụkụ ọ bụla egosiri bụ obere nka, ụdị mmegharị ahụ nke na-enye ntakịrị echiche. Ọ bụrụ na ịchọrọ na Madame Tussauds Museum bụ naanị ndị a, ana m agwa gị na ha abụghị, na na United States enwere ọtụtụ ihe ngosi nka nke wax.
N'isiokwu anyị taa, anyị ga-ekwu maka ya kacha mma waks na America, ya mere dee ndị masịrị gị na njem ọzọ ị ga-eme.
1 Wax ngosi ihe mgbe ochie
2 Wax ngosi ihe mgbe ochie na United States
3 Franlọ Frankenstein
5 Ihe nkiri Hollywood Wax
7 Ọkpụkpụ Wax Museum
10 National wax ngosi nka nke ndi isi
Wax ngosi ihe mgbe ochie
Kedu ihe bụ akụkọ ihe mere eme nke ụmụ bebi wax? Ọ malitere na ụlọ olili nke ndị eze Europe, na-ahụ maka imepụta ihe dị ka ndụ, yi uwe nwoke ahụ nwụrụ anwụ. Gịnịkwa mere ha ji na-emepụta ugboro ugboro? Site na omenala nke ememe olili ozu nke ahụ pụtara ibu ozu ya n'igbe ozu, na-aga n'ihu ma ya mere ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma.
Mgbe ahụ echiche nke ịme a wax effigy, nke mbụ isi na aka bụ akụkụ ndị pụtara ìhè nke uwe eze. Mgbe olili ma ọ bụ na-eli ozu, ọ ghọrọ omenala ịhapụ iberibe iberibe a ngosipụta ụka, nke mechara dọta ọtụtụ ndị chọrọ ịmata ihe. Ma anyị maara, ihe niile ahụ nwere ọnụ ahịa.
Ka oge na-aga, itinye ndụ na ọnụ ọgụgụ ndị a ghọrọ ihe a ma ama na enwere ezigbo ndị omenkà na-agagharị n'ụlọ ikpe Europe na-achịkọta ọrụ na ego. Omenala amuru na Europe n’etiti ndi eze, mana nke bu eziokwu bu na n’ikpeazụ o gafere oke osimiri ma taa enwere ulo oru ihe mgbe ochie di kwa n’America na uwa nile, ma abughi nke ụgwọ mana ndi amara.
Wax ngosi ihe mgbe ochie na United States
United States nwere ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie wax, ụfọdụ dị na California, ụfọdụ nọ na New York, Las Vegas, Washington na ndepụta ahụ na-aga n'ihu. N'ebe a, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ wax nke ụdị niile, site na ụfọdụ ụgwọ, na-agafe ama egwu na ndi odide sitere na akwukwo a ma ama rue, n'ezie, Igwe kpakpando Hollywood nke oge niile.
Muselọ ihe ngosi nka dị na Ọdọ Mmiri George, New York, na ọ bụ ihe ngosi nka nke egwu na, agbanyeghị na aha ahụ na-ezo aka na Frankestein, enwere ndị ọzọ ihe nkiri egwu na akwụkwọ edemede nke ahụ nwere ike imenye gị ụjọ. Nchịkọta a dabere na akwụkwọ egwu dị egwu na akụkụ ọdịnala ọdịnala nke ụdị a, yabụ enwere ọnọdụ ụfọdụ nke ime ihe ike nwere ike ịdịtụ ike.
Fọdụ ihe odide na-eti mkpu, ụfọdụ na-akwagharị ntakịrị ma ha niile na-atụ ụjọ, ebe ọ bụ a anọgidewokwa na-anyụ ụlọ, ka emechara. Lọ ihe ngosi nka ka na-emeghe n'ọrịa na-efe efe mana ọ dị mfe ịlele ụbọchị ya na awa ya n'ihi na ihe niile nwere ike ịgbanwe. N'oge a na-emeghe ya na ngwụsị izu site na 10 ruo 5 ma ọ bụ 6 nke mgbede. Ntinye bụ $ 10,75 maka okenye na $ 9 maka ụmụaka na ụmụ akwụkwọ afọ 81 ruo 13.
Jesee James bụ a Anụ ohi ọdịda anyanwụ, kpara ike. Ekwuru na ọ nwụrụ na 1882 mana ụlọ ihe ngosi nka na-eme ka ọ zuo oke. Lọ ihe ngosi nka nwere foto, ozi, Devid agụghị ndị gbara ihe, ihe karịrị 100 puku, n'etiti ihe onwunwe nke James na ndị òtù ya, ngwá agha gụnyere.
Na mgbakwunye, ndị ọbịa ga-ahụ ihe nkiri gbara ajụjụ ọnụ na ndị maara James na n'ezie, enwere ọnụọgụgụ ihe eji emegharị ụlọ ndị ohi, oge nke Agha Obodo, ịpụnara ya na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ maka ibi ndụ ahụmihe dị iche iche, ọ dịkwa ka emezuru nke ọma.
Muselọ ihe ngosi nka Ọ dị nso na Meramec Caves ma ọ dịkwa n’otu n’ime ụzọ ndị ama ama n’ụwa nile, Nsoro 66, ka ọ na-agafe Missouri. Mgbe ahụ, a ga-emecha nleta ahụ site n'iji ụkwụ gafere n'ọgba ndị a nke bịara pụta ìhè mgbe idei mmiri siri ike na 1941. O yikwara ka ọgba ndị ahụ bụ ebe nzuzo nke ndị otu Jesse James.
Lọ ihe ngosi nka nwere oge dị iche iche dabere na ọnwa, mana buru n'uche na n'etiti Nọvemba na Machị ọ na-emechi. Ntinye bụ $ 10 maka okenye.
Ihe nkiri Hollywood Wax
Muselọ ihe ngosi nka dị na Myrtle Beach, South Carolina. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu ịga obere oge tupu ị gafee n'ụsọ osimiri na egwuregwu ya. Enwere otutu onu ogugu nke ndị siri ike na ụfọdụ zombies, ndị a ma ama na-emecha.
Ntinye aka na okenye na-efu n'etiti $ 27 na $ 30, mana ị nwere ike ịzụta ya Nbanye niile gafere ma gaa na ebe ngosi ihe mgbe ochie ato: Hollywood Wax Museum, Hannah’s Maze of Mirrors and Outbreak, Dread the Undead.
Lọ ihe ngosi nka mepere kwa ụbọchị site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere 9 nke ụtụtụ ma n'oge a, ojiji nke chinstrap bụ iwu.
Waxlọ ihe ngosi nka nke wax dị na baltimore na ọ bụ banyere akụkọ banyere ndị Africa kwabatara na United States. Ihe omuma enyere ebe a adighi akuzi ya na ulo akwukwo ma na mgbakwunye na igu akwukwo nke oma, obu kwa obi uto, dika ulo oru ihe ochie.
E nwere ihe ndị ọzọ Ihe ngosi 150 dị ndụ na ọtụtụ ụlọ ngosi nwere isiokwu dị iche iche. A na-akpọ otu Gbọ oloko nke ala, na ọnụ ọgụgụ nke Harriet Tbman na Thomas Garret, a na-akpọ akụkụ ọzọ Ụlọ ahịa ma e nwere Madam CJ Waler, a na-akpọ onye ọzọ Ikike ụmụ nwanyị na mkpochapụ o nwere onu ogugu nke Rosa Parks ma obu Shirley Chisholm, dika ima atu. Ndị a niile bụ aha ndị ojii bụ ndị mere akara ha na Amerịkà.
Muselọ ihe ngosi nka bu ihe ama maka ndu ọphu a kpụru ohu ohu ọ na-esikwa ike ịhụ ọnọdụ nke njem a na-ebu. Banye na okenye na-efu $ 15 na ụlọ ihe ngosi nka na-emeghe Monday, Wednesday na Saturday site na 10 ruo 5 pm na Sọnde site na ehihie ruo 5 pm. Enwere njem njegharị.
Ọkpụkpụ Wax Museum
Muselọ ihe ngosi nka na-arụ ọrụ na ụlọ ọgwụ kacha ochie na mba ahụ, nke na-enye ya amara. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke wax na United States ma enwere ọnụ ọgụgụ dị iche iche dị iche iche site na ndị ọchịagha ndị Rom ruo na narị afọ nke XNUMX ndị a ma ama.
Onye guzobere ụlọ ihe ngosi nka, George Potter, nwere mmasị na ụmụ bebi wax na nleta London ma chọọ ime ihe yiri ya na United States, mana ya na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba. Ya mere, ọ zụrụ wax nke kachasị mma na France, ntutu kachasị mma n'Italytali, ma kwụọ ndị omenkà kacha mma n'ụwa. Rụpụta mere na Belgium ma mgbe ahụ, a kpaliri ihe niile gaa na ụlọ ngosi ihe nka na 1949.
Muselọ ihe ngosi nka dị na National Historic District, San Agustin, ndị kasị ochie European obi na mba, a nnọọ ọmarịcha ebe. Ọ dị na 31 Orange St. ma mepee Mọnde ruo Sọnde site n’elekere 9 nke ụtụtụ ruo ise na mgbede. Missionbanye bụ ihe dị ka $ 5.
Muselọ ihe ngosi nka dị Mahadum Salem, Massachusetts. na-eme emume ncheta afọ 25 nke afọ a ma ị nwere ike ịga leta ebe nkiri nke Salem Witch Village na Ncheta ilszọ Okporo ilszọ yana Charter Street Burying Point, ihe niile metụtara Amoosu ichu nta.
Saịtị bụ ibu zuru ezu n'ihi na mgbakwunye na nke ihe ngosi nka i nwere ike na-aga n'okporo ámá abalị mgbe niile n'okporo ámá na n'ụlọ ndị na-ebute nsogbu. Njegharị ahụ tụlere akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ndị ahụ, ọrụ nke mmụọ, na ebubo amoosu ndị dakwasịrị ụmụ nwanyị n'oge ahụ. Ọzọkwa enwere ụbọchị njegharị.
N'ezie, maka oge a na-emechi ihe ngosi nka n'ihi ọrịa ahụ, mana n'oge na-adịghị anya, a ga-ekwupụta mmeghe nke ire ere tiketi maka Ọktọba, nke dị na July. Ọbụna tiketi ndị a zụrụ maka 2020 ga-adị irè.
Na Salem ị nwekwara ike ịga na Iralọ ihe ngosi nka Paireti na Bristol, Connecticut, ndị Dungeon Classic Movie Museum, nnukwu ebe ma ọ bụrụ na ihe nkiri egwu na-amasị gị, nke nwere ọnụ ọgụgụ kpochapụwo Dracula, Frankestein, Nosferatu na Phantom nke Opera, dịka ọmụmaatụ.
Muselọ ihe ngosi nka a bụ na Hollywood, California, na ugbu a ọ na-emechi. E kewara mkpokọta ya n'ọtụtụ ebe: Oge a, Mmụọ Hollywood, Pop na Oyiyi Oyiyi. Enwekwara mpaghara mebere, mpaghara raara nye '90s, ozo nke ihe nkiri iju 4D na onye ọzọ raara nye Jimmy Kimmel.
Ntinye aka bụ $ 20 ma enwere Hollywood Walk of Fame na ama 115 ịse foto. Madame Tussauds ngosi ihe mgbe ochie na-doro anya na kasị mma mara otú ị nwekwara ike ịga ụfọdụ n'ime alaka ụlọ ọrụ Ọ dị mma, enwere na New York, London na obodo ndị ọzọ dị na Europe yana Eshia.
National wax ngosi nka nke ndi isi
Umlọ ihe ngosi nka izizi a bụ na South Dakota O nwekwara ihe dị ka otu narị ihe e dere n'ụdị waks nke ọ bụla n'ime onyeisi oche iri ise na ise nke United States. Muselọ ihe ngosi nka bu dị naanị nkeji ise site na Ugwu Rushmore, ugwu a ma ama na ihu ndị isi anọ, na obodo Keystone.
Enwere ntuziaka ọdịyo nke na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ọnọdụ ndị ọnụọgụ ahụ na-emepụtaghachi, na vidiyo nkeji asaa na-egosi etu ndị omenkà siri mee ihe osise. Enwekwara ihe mkpuchi ọnwụ nke ndị isi ala, kpakpando nke otu narị na ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme. Lọ ihe ngosi nka mepere taa.
Lọ ngosi ihe mgbe ochieTurismo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Waxlọ ihe ngosi nka kacha mma na America
Ihe ọ drinkụ drinkụ na Holland